ကိုယ်က ပေးမှ ပြန်ရတဲ့ အချစ်တွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ ပေးတဲ့ အချစ်တွေကို တန်ဖိုးထားပါ -
ကိုယ်က ပေးမှ ပြန်ရတဲ့ အချစ်တွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ ပေးတဲ့ အချစ်တွေကို တန်ဖိုးထားတတ်လာတဲ့အခါ
ကိုယ်က ပြုံးပြမှ ပြန်ရတဲ့ အပြုံးတွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးရွှင်ရီမောပြတတ်တဲ့ လူတယောက်ကို တွေ့ရတဲ့အခါ …..
ကိုယ့်ဘက်က အမြဲပေးနေရတဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေထက် ကိုယ့်ကို မို့လို့ ကြင်နာသနားတတ်စွာ ခွင့်လွှတ်သည်းခံတာတွေ ကြုံရတဲ့အခါ ….
ကျွန်မ ကမ္ဘာဟာ နေလို့ ပိုကောင်းလာပါတယ် ….. လူတွေရဲ့ သဘောက မရတဲ့အရာကို ပိုလိုချင်ကြတယ် ….
ကိုယ်မစီးနိုင်တဲ့ သိပ်ဈေးကြီးတဲ့ကားကို စီးချင်သလိုမျိုး , ကိုယ်မဝယ်နိုင်တဲ့ အိမ်တလုံးကို လိုချင်နေသလိုမျိုး သက်မဲ့တွေအပေါ်တောင်ရှိရင် ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့ လူတယောက်ရဲ့ အချစ်ကို လိုချင်မိတာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး……
မရတဲ့ အရာတခုကြောင့် နေ့ပေါင်းများစွာ စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ် ….. မျကိရည်တွေ ကျခဲ့ရတယ် …. မလုပ်သင့်တာတွေ လုပ်တယ် … တောင်းပန်တယ် … ခယတယ် ….. ဒီလူတယောက်အတွက် အရှက်သိက္ခာဆိုတာ ချနင်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေတောင် ရှိကြတယ် …..
ဒါပေမဲ့ ဘာပြန်ရခဲ့လဲ ?
တခါတလေ သူ အဖက်လုပ်ချင် လုပ်တယ် …စကားပြန်ပြောရင် ပြောတယ် …. တခါတလေ ရက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ထားခြင်း ခံရတယ် …. seen ဖြစ်ပြီး အဖက်လုပ်မခံရတဲ့ အချိန်တွေ , ကိုယ့်ဖုန်းကို ignore လုပ်ထားတဲ့ အချိန်တွေက ပိုပါတယ် … ကိုယ်ဆိုတာ သူ့ဘဝရဲ့ အမှုန်အမွှားလောက်ပဲ ………
ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့က အချစ် ဆိုတာကို စိတ်နာကြသေးတယ် ….. တကယ်တော့ အချစ်က အချစ်ပါပဲ …. သူ့ဘာသာသူ တည်ရှိနေတာ….. ကျွန်မတို့ စိတ်နာရမှာ အဲဒီ လူ ကိုပါ …….
တခါလောက် ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့သူ …
ကိုယ်ပြောတာတွေ နားထောင်ပေးတတ်တဲ့သူ …
ကိုယ့်အတွက် ပခုံးတဖက် အမြဲ အဆင်သင့်ရှိတဲ့သူ …
ကိုယ်နေမကောင်းရင် သူ့ကမ္ဘာပျက်တတ်တဲ့သူ …
ကိုယ့်နာမည်ဟာ သူ့ priority list မှာ အမြဲရှိတဲ့သူ …
ကိုယ့်ကို အချစ်မျိုးစုံနဲ့ ကြင်နာနိုင်တဲ့သူ တယောက်နဲ့ ပတ်သတ်ကြည့်ဖူးပါသလား ?
ဘဝမှာ အချစ်ခံရခြင်းဟာ ကုသိ်ုလ်ကောင်းခြင်းတမျိုးပါ …. တချိူ့တွေက ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်း ရုပ်ရည် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ရွေးကြတယ် ….. Fb မှာ ပျော်ရွှင်တဲ့ပုံတွေ anniversary တွေ suprise လက်ဆောင်တွေ တင်တိုင်း အချစ်ခံရတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ……
ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့အတူ လှိုင်းဒဏ် လေဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့သူကို ခေါ်တာပါ …..
ချမ်းသာခြင်းကိုလဲ အတူ စံစားပြီး ဆင်းရဲခြင်းကြုံလာရင်လဲ အတူရုန်းကန်နိုင်သူပါ …..
ကိုယ်ရွေးချယ်မဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော် ယောကျာ်းဟာ ရုပ်ချောဖို့ မလိုပါဘူး ……. ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီး တန်ဖိုးထားနေဖို့ပဲ လိုတာပါ …….
ယောကျာ်းတယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးတထား အချစ်ခံရဖို့ ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင် တခုပဲ လိုပါတယ် …….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထား ဖို့ပါပဲ ….. ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်သိမှ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို သိတဲ့သူနဲ့ ဆုံဆည်းရမှာပါ ….
ကိုယ့်အလှ ကိူယ်မြတ်နိုးပါ …..
ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်ချစ်ပါ …..
ကိုယ့်ကမ္ဘာ ကိုယ်တည်ဆောက်ပါ …..
ပြီးတော့ ကိုယ့် value သိတဲ့သူကိုသာ ရွေးချယ်ပါ …..
ကိုယျက ပေးမှ ပွနျရတဲ့ အခဈြတှထေကျ ကိုယျ့ကို မို့လို့ ပေးတဲ့ အခဈြတှကေို တနျဖိုးထားပါ
ကိုယျက ပေးမှ ပွနျရတဲ့ အခဈြတှထေကျ ကိုယျ့ကို မို့လို့ ပေးတဲ့ အခဈြတှကေို တနျဖိုးထားတတျလာတဲ့အခါ
ကိုယျက ပွုံးပွမှ ပွနျရတဲ့ အပွုံးတှထေကျ ကိုယျ့ကို မို့လို့ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ ပွုံးရှငျရီမောပွတတျတဲ့ လူတယောကျကို တှရေ့တဲ့အခါ …..
ကိုယျ့ဘကျက အမွဲပေးနရေတဲ့ ခှငျ့လှတျခွငျးတှထေကျ ကိုယျ့ကို မို့လို့ ကွငျနာသနားတတျစှာ ခှငျ့လှတျသညျးခံတာတှေ ကွုံရတဲ့အခါ ….
ကြှနျမ ကမ်ဘာဟာ နလေို့ ပိုကောငျးလာပါတယျ ….. လူတှရေဲ့ သဘောက မရတဲ့အရာကို ပိုလိုခငျြကွတယျ ….
ကိုယျမစီးနိုငျတဲ့ သိပျစြေးကွီးတဲ့ကားကို စီးခငျြသလိုမြိုး , ကိုယျမဝယျနိုငျတဲ့ အိမျတလုံးကို လိုခငျြနသေလိုမြိုး သကျမဲ့တှအေပျေါတောငျရှိရငျ ကိုယျ့ကို မခဈြတဲ့ လူတယောကျရဲ့ အခဈြကို လိုခငျြမိတာ အဆနျးတော့ မဟုတျပါဘူး……
မရတဲ့ အရာတခုကွောငျ့ နပေ့ေါငျးမြားစှာ စိတျဆငျးရဲနရေတယျ ….. မကြိရညျတှေ ကခြဲ့ရတယျ …. မလုပျသငျ့တာတှေ လုပျတယျ … တောငျးပနျတယျ … ခယတယျ ….. ဒီလူတယောကျအတှကျ အရှကျသိက်ခာဆိုတာ ခနြငျးခဲ့တဲ့ အခြိနျတှတေောငျ ရှိကွတယျ …..
ဒါပမေဲ့ ဘာပွနျရခဲ့လဲ ?
တခါတလေ သူ အဖကျလုပျခငျြ လုပျတယျ …စကားပွနျပွောရငျ ပွောတယျ …. တခါတလေ ရကျပေါငျးမြားစှာ ပဈထားခွငျး ခံရတယျ …. seen ဖွဈပွီး အဖကျလုပျမခံရတဲ့ အခြိနျတှေ , ကိုယျ့ဖုနျးကို ignore လုပျထားတဲ့ အခြိနျတှကေ ပိုပါတယျ … ကိုယျဆိုတာ သူ့ဘဝရဲ့ အမှုနျအမှားလောကျပဲ ………
ဒါနဲ့ပဲ ကြှနျမတို့က အခဈြ ဆိုတာကို စိတျနာကွသေးတယျ ….. တကယျတော့ အခဈြက အခဈြပါပဲ …. သူ့ဘာသာသူ တညျရှိနတော….. ကြှနျမတို့ စိတျနာရမှာ အဲဒီ လူ ကိုပါ …….
တခါလောကျ ကိုယျ့ကို တနျဖိုးထားတဲ့သူ …
ကိုယျပွောတာတှေ နားထောငျပေးတတျတဲ့သူ …
ကိုယျ့အတှကျ ပခုံးတဖကျ အမွဲ အဆငျသငျ့ရှိတဲ့သူ …
ကိုယျနမေကောငျးရငျ သူ့ကမ်ဘာပကျြတတျတဲ့သူ …
ကိုယျ့နာမညျဟာ သူ့ priority list မှာ အမွဲရှိတဲ့သူ …
ကိုယျ့ကို အခဈြမြိုးစုံနဲ့ ကွငျနာနိုငျတဲ့သူ တယောကျနဲ့ ပတျသတျကွညျ့ဖူးပါသလား ?
ဘဝမှာ အခဈြခံရခွငျးဟာ ကုသျိုလျကောငျးခွငျးတမြိုးပါ …. တခြိူ့တှကေ ကိုယျသတျမှတျထားတဲ့ စံနှုနျး ရုပျရညျ ပိုငျဆိုငျမှုတှနေဲ့ လကျတှဲဖျောကို ရှေးကွတယျ ….. Fb မှာ ပြျောရှငျတဲ့ပုံတှေ anniversary တှေ suprise လကျဆောငျတှေ တငျတိုငျး အခဈြခံရတယျလို့ မထငျပါနဲ့ ……
ဘဝလကျတှဲဖျောဆိုတာ ကိုယျနဲ့အတူ လှိုငျးဒဏျ လဒေဏျကို ကွံ့ကွံ့ခံရငျဆိုငျလို့ ကိုယျ့ကိုပါ ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့သူကို ချေါတာပါ …..
ခမျြးသာခွငျးကိုလဲ အတူ စံစားပွီး ဆငျးရဲခွငျးကွုံလာရငျလဲ အတူရုနျးကနျနိုငျသူပါ …..
ကိုယျရှေးခယျြမဲ့ ဘဝလကျတှဲဖျော ယောကျြားဟာ ရုပျခြောဖို့ မလိုပါဘူး ……. ကိုယျ့ကို ခဈြခငျမွတျနိုးပွီး တနျဖိုးထားနဖေို့ပဲ လိုတာပါ …….
ယောကျြားတယောကျရဲ့ တနျဖိုးတထား အခဈြခံရဖို့ ဘာလိုအပျလဲဆိုရငျ တခုပဲ လိုပါတယျ …….
ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုးထား ဖို့ပါပဲ ….. ကိုယျ့တနျဖိုးကိုယျသိမှ ကိုယျ့တနျဖိုးကို သိတဲ့သူနဲ့ ဆုံဆညျးရမှာပါ ….
ကိုယျ့အလှ ကိူယျမွတျနိုးပါ …..
ကိုယျ့ဘဝ ကိုယျခဈြပါ …..
ကိုယျ့ကမ်ဘာ ကိုယျတညျဆောကျပါ …..
ပွီးတော့ ကိုယျ့ value သိတဲ့သူကိုသာ ရှေးခယျြပါ …..
This Year : 147092
Total Users : 442225
Total views : 1700416